Iindaba - Izinto ngokubanzi malunga neeWelding Electrode
Izinto ngokubanzi Malunga Welding Electrodes
I-Tianqiao welding electrode lukhetho lobuchule
I-electrode ye-Welding ibalulekile, kwaye kubalulekile ukuba i-welder kunye nabasebenzi abachaphazelekayo bayazi ukuba loluphi uhlobo abanokulusebenzisa kwimisebenzi eyahlukeneyo.
I-electrode yintsimbi eyenziwe ngocingo, eyenziwe ngezinto ezifana nesinyithi esidityanisiweyo. Kubaqalayo, kukho ii-electrode ezinokusetyenziswa nezingasetyenziswanga. Kwikhuselo le-arc welding (SMAW) ekwabizwa ngokuba yi-stick, ii-electrode ziyasebenziseka, oko kuthetha ukuba i-electrode iyasetyenziswa ngexesha lokusetyenziswa kwayo kwaye iyanyibilika nge-weld. Kwi-Tungsten Inert Gas welding (TIG) i-electrode ayinakusetyenziswa, ngenxa yoko ayinyibiliki kwaye ibe yinxalenye ye-weld. Ngegesi yensimbi yeArc Welding (GMAW) okanye iMIG welding, ii-electrode zihlala zondliwa ngocingo. I-2 ye-Flux-cored arc welding ifuna i-electrode eqhubekayo yokutya esetyenziswayo ene-flux.
Indlela ukukhetha welding electrode?
Ukukhetha i-electrode kugqitywa ziimfuno zomsebenzi wokuwelda. Oku kubandakanya:
Kukho ukukhanya kunye nobunzima camera ii-electrode. Ukukhanya okugutyungelwe i-electrode kunesambatho sokukhanya esisetyenziswa ngokuxubha, ukutshiza, ukudipha, ukuhlamba, ukusula okanye ukuwa. Ii-elektrode ezinzima zitywinwe ngokuqengqeleka okanye ukuvuza. Zintathu iindidi eziphambili zokwaleka okunzima: izimbiwa, iselulosi, okanye ukudityaniswa kwezi zimbini. Iingubo ezinzima zisetyenziselwa ukudibanisa i-iron cast, i-steels kunye neendawo ezinzima.
Athetha ntoni amanani kunye noonobumba kwiintonga zewelding?
Umbutho we-American Welding Society (i-AWS) unenkqubo yokubala enika ulwazi malunga ne-electrode ethile, njengoluphi uhlobo lwesicelo esisetyenziselwa yona kunye nendlela ekufuneka isetyenziselwe ukusebenza ngokukuko.
Iidijithi Uhlobo Ukwaleka Welding yangoku
0 Iselulosi ephezulu yesodiyam DC +
1 Iselulosi ephezulu potassium AC, DC + okanye DC-
2 I-titania ephezulu yesodiyam U-AC DC-
3 I-titania ephezulu ye-titania AC, DC +
4 Umgubo wentsimbi, titania AC, DC + okanye DC-
5 Isodiyam ephantsi DC +
6 I-hydrogen potassium esezantsi AC, DC +
7 I-oxide ephezulu yentsimbi, umgubo we potassium AC, DC + okanye DC-
8 I-hydrogen potassium esezantsi, umgubo wentsimbi AC, DC + okanye DC-
I "E" ibonisa iarc welding electrode. Amanani amabini okuqala enani elinemivo emi-4 kunye namanani amathathu okuqala enani elinemivo emi-5 amele ukuqina. Umzekelo, i-E6010 ithetha iiponti ezingama-60,000 nge-intshi nganye yesikwere (PSI) amandla okuqina kunye ne-E10018 kuthetha amandla ayi-100,000 e-tensile. Inombolo elandelayo kwidijithi yokugqibela ibonisa indawo. Ke, u "1" umela yonke i-electrode yendawo, "2" kwi-elektrode ethe tyaba kwaye ethe tyaba, kunye no "4" kwiflethi ethe tyaba, ethe tye, ethe nkqo ezantsi kunye ne-electrode ephezulu. Iidijithi ezimbini zokugqibela zichaza uhlobo lweengubo kunye ne-welding yangoku. 4
I-electrode Tensile Strength Indawo Uhlobo Ukwaleka & yangoku
Ukwazi iindidi ezahlukeneyo zee-electrode kunye nokusetyenziswa kwazo kuyanceda ekwenzeni umsebenzi we-welding ngokuchanekileyo. Ukuqwalaselwa kubandakanya indlela yewelding, izinto ezidityanisiweyo, iimeko zangaphakathi / zangaphandle, kunye neendawo zokuwelda. Ukuziqhelanisa nemipu eyahlukeneyo ye-welding kunye nee-electrode kunokukunceda ubone ukuba yeyiphi i-elektrode oyisebenzisela iprojekthi ye-welding.